Las Tablas de Daimiel nwere oke ọkọchị | Network Meteorology
Tablas de Daimiel National Park nke dị na Ciudad Real na-awakpo oke ọkọchị na mmiri na-aga n'ihu na-akpata mgbanwe ihu igwe. N'ihi oke okpomọkụ edere na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ nke mmiri evaporated na-abawanye, ya mere oke mmiri na-ebelata.
Dịlarị nke anọ akọrọ afọ na National Park na-ata ahụhụ ma ụdị ndụ dị iche iche ọ na-akwado yana usoro obibi obibi na-emebi. Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkọchị akwụsịghị?
1 Oké ọkọchị na Tablas de Daimiel
Oké ọkọchị na Tablas de Daimiel
Emere akụkọ na-egosi na enweghị mmiri ozuzo n'ihi afọ nke anọ nke akọrọ na mpaghara Ciudad Real edebanyela, jiri lita 317,6 kwa square mita anakọtara na ọdụ Saimiel meteorological, ebelatala mmiri na ogige mba, nke kwụsịrị ịnara mmiri site na mmiri Guadiana n'etiti ọnwa Julaị nke afọ a.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ogige mba ahụ na-egbochi ala mmiri 1.343 ha. Taa, o nwere naanị 528 ha na mmiri. Nke a na - eweta ọtụtụ mmetụta na avifauna, nke na - enweghị ebe ọ ga - ezu ike n'okporo ụzọ njem ha. N'afọ a, edenyerela storks kachasị nke 60 na njem ntụgharị, ngaji 86 na ọnụnọ buru ibu nke ardeidae. Nke a pụtara na ogige mba dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ụdị nnụnụ, nke ụkọ mmiri na-emetụta.
Ọ pụtawo na usoro mmechi na-ewere ọnọdụ. Nke a na - eme n'ihi nsị nke ahịhịa ndụ, nke yana ọnụ ọgụgụ nke ihe siri ike kwụsịtụrụ, ka a na - emepụta na ọdọ mmiri nke ogige ahụ na ha na-ebelata ikike ha nwere ịchekwa mmiri.
Ndị na-ahụ maka ogige ahụ na-enyocha nnukwu ibu nke ihe ndị na-edozi ahụ nke sedimenti ahụ dere. Nke a nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma, ebe ọ na-ewepụta isi na-adịghị mma na cladophors nke na-enye ndị ọbịa foto ọjọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Las Tablas de Daimiel nwere oke ọkọchị